Germany oo Giriiga kasoo qaatay qoxooti ay dad Soomaali ah kujiraan. - NorSom News
Germany oo Giriiga kasoo qaatay qoxooti ay dad Soomaali ah kujiraan.
Dawladda Jarmalka ayaa toddobaadkan soo qaaday in ka badan 80 qof oo qaxooti ah oo ay ku jiraan dad Soomaali ah, kuwaas oo laga soo qaaday dalka Greece. Dadkan ayaa ah dad u badan caruur iyo dad kale oo xanuunsan, kuwaas oo dowlada Germany ay dib u dajin nololeed u sameyn doonto.
Tirada dadkan oo isku dar ah 80 qof, ayaa waxaa kujiro ilaa lix qof oo soomaali ah, sida ay sheegeen masuuliyiin katirsan jaaliyada soomaaliyeed ee Germany.Waxaana xerada qoxootiga ee dadjab kagfa sii qaaday ku sugan boqolaal kale oo qoxooti ah oo duruufo nololeed ay heystaan.
Germany ayaa sanadahan danbe noqday dalka ugu badan ee dadka magangalyo doonka ah ay u raadsadaan nolol iyo magangalyo, sidoo kale dowlada Germany ayaa kamid ah dowladaha dadka ugu badan kasoo qaata xeryaha qoxootiga, si dib u dajin loogu sameeyo.
Previous articleDaawo: Masaajidka Soomaalida Ee Oslo oo maanta buuq iyo is-qabqabsi ka dhacay.
Next articleWarbaahinta Norway maxey ka qoreen xil ka qaadistii R.W X. A. Kheyre?